Iwo anonyanya kufarirwa Mapakeji mapakeji mune akasiyana akasiyana. | Linux Vakapindwa muropa
Urwu ndirwo runyorwa rweanonyanya kufarirwa snap mapakeji nekuparadzirwa
Iyo runyorwa rweanonyanya kufarirwa Snap mapakeji. Uye kana iwe uri fan of yemahara software, iri zvirokwazvo harisi rako vhiki. Izvo ndezvekuti, yakawedzerwa mukusiya basa kwaStallman izvozvi unozoona kuti ma linuxers anoita kunge anotida proprietary services neMicrosoft application.
Snapcraft, izita reprojekti duye kugadzira uye kushambadzira kweayo yega-ane mafomati fomati neCanonical. Mamaneja ayo akaongororwa ayo ari mafomu anonyanya kutorwa pasi nevashandisi vematanhatu ekuparadzira. Uye mhedzisiro, zvirinani kwandiri, inoshamisa.
1 Iwo akaongororwa akagoverwa
2 Chinyorwa chemapakeji anonyanya kufarirwa
3 Chinzvimbo nekuparadzirwa
Iwo akaongororwa akagoverwa
Vashandisi vekare veLinux vachandiregerera nekudzokorodza pfungwa dzinozivikanwa. asi, kunyatso kuongorora chinzvimbo, zvinonakidza ongorora maficha yemugove wega wega.
Arch Linux: Iko kugoverwa kunogadziriswa uko kuiswa kwacho kunoda kuwanda kwekupindira kwevashandisi. Iyo ine wiki ine mirayiridzo yakakwana kwazvo:
CentOS: Iko kugoverwa kwenharaunda kunotsigirwa uye iyo inogovera kodhi neRed Hat. Inotarisa pane kushandiswa kwehunyanzvi. Chaizvoizvo pane maseva.
Debian: Iyo yekuparadzira nharaunda inotarisana nekupa akanakisa emahara software zvirongwa pane akawanda mapuratifomu sezvinobvira.
fedora: Kugoverwa kwenharaunda kwakanangana nemushandisi wepamusha, kunyangwe iine vhezheni yemaseva. Pakati pese, inofambira mberi maficha ayo gare gare shanduro dzeRed Hat neCentOS dzichava nadzo.
maokoro: Iko kugovera kunoenderana neArch Linux asi ne masvikiro anozvishandura uye anoita kuti zvive nyore maitiro ekumisikidza ekugovera uye zvirongwa zvakasiyana.
Ubuntu: Debian-yakavakirwa pamba mushandisi desktop yekuparadzira. Iyo zvakare ine vhezheni yemaseva.
Chinyorwa chemapakeji anonyanya kufarirwa
Spotify: Mutengi wepamutemo webasa rekushambadzira mumhanzi wezita rimwe chete
Code: Microsoft Inobatanidza Nzvimbo Yekuvandudza Nzvimbo: Ipakeji inochengetwa uye kuvandudzwa nekambani pachayo, uye kunyangwe iri yakavhurwa sosi, inounganidza ruzivo.
Skype: Mutengi wepamutemo weMicrosoft vhidhiyo uye odhiyo yekufona sevhisi.
Discord: Unofficial mutengi wemavara uye izwi rekutaura sevhisi yeGamers.
Wecan: Kunyorera kwekushandisa kweiyo Kanban maitiro.
Slack: Mumwe mutengi wepamutemo, panguva ino kubva kuzita rezita rimwe chete kuronga basa remapoka. Zvinotsanangurwa kuti mutengi weLinux ari mubeta.
LXD: Iyi Canonical's container inobata system.
microk8s: Iyo diki-diki vhezheni yeKubernetes. Kubernetes ndeye yakavhurika sosi chikuva chekugadzirisa iyo kuendesa, kuyera, uye manejimendi emidziyo yekushandisa.
Helms: Chishandiso chekugadzirisa zvakafanogadzirirwa Kubernetes mapakeji.
firefox: Bhurawuza reMozilla rinotarisa kune zvakavanzika.
Nextcloud: Platform yekugadzira yedu pachedu masevhisi.
Pycharm-nharaunda: Yepamutemo snap yeyenzvimbo vhezheni yenzvimbo yakasanganiswa yekusimudzira yePython.
VLC: Iyo multimedia player inoenderana nemazhinji mafomati.
post-man: Iyo seti yezvishandiso yekuvandudza kweapplication programming interfaces (APIs)
Chrome: Iyo yakavhurwa sosi vhezheni yeGoogle browser.
Canonical-Livepatch: Iyo sisitimu iyo inobvumidza kuisa yakakosha kugadzirisa yeLinux kernel pasina kutanga reboot system.
Isu vashandisi veLinux semimhanzi. Uye yeLinux programmers, Microsoft inosanganisa budiriro nharaunda. Hapana imwe yedzimwe nzira (kunze kwePycharm pane imwechete distro) inoonekwa. Kunze kwekunge iwo akaiswa kubva kuchinyakare zvinyorwa. Ndiri kushamisika Android Studio haina kuratidza.
Nenzira, ndingadai ndisina kumbofungidzira huwandu hwevatambi paArch Linux
Panyaya yekugovera kunongedzerwa pane yemubatanidzwa munda, pamwe chakanyanya kushamisa ndiSpotify. Asi, sysadmins zvakare vane mvumo yekuteerera kumimhanzi.
Shamwari dzaDebian dzinofarira kusununguka software, asi hadzinyari kuteerera mimhanzi yakanaka pavanoshandisa. Zvakanaka, mimhanzi yakanaka kuratidzwa kwechido. Ndakasiya Spotify apo ndaitsvaga Bach mimhanzi uye akandipa kuti nditerere kune bachata.
Fedora kugoverwa kunokosheswa nevamiririri veamateur, saka chinzvimbo chayo musanganiswa wezvirongwa zvevaraidzo uye maturusi ebasa. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti mune urwu runyorwa iwo ese epamutemo mapakeji, ndiko kuti, akagadzirwa nevatangi vekutanga vezvishandiso.
Iko hakuna zvakawanda zvekutaura apa. Zvichipa chimiro chekuparadzira, kugadzirwa uye zvekuvaraidza kunyorera kwakawanda. Kunyangwe ndichiri kushamisika nekuwanda kwevanhu vachiri kushandisa Skype.
Vagadziri veUbuntu vanofanirwa kucherechedza voisa Vlc nekumisikidza panzvimbo peTotem neRhythmbox. Ndiri kushamiswa neCanonical-Livepatch, asi sezvo huwandu husinga sarure pakati pemaseva nedesktop, nzvimbo yechishanu yeLivepatch inofanira kubva ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo rondedzero yeanonyanya kufarirwa Snap mapakeji nekuparadzira kwaizivikanwa
Ndiri kushamisika paArch neManjaro kuti vanoshandisa Snap. Ivo vane yay nevamwe vatengi veAUR, vane chiuru zvakapetwa zvakapetwa kupfuura Snap.
Mumakore manomwe ekushandisa Manjaro, pandakangofunga kuti ndaifanira kushandisa Snap. Zvese zvimwe zvakapihwa neAUR. Ndokunge, ndinofunga kuti Snap yakanaka, asi mune aya madhiri iwo anowedzeredza kune chimwe chinhu chatogadziriswa kare, uye icho chaidikanwa mumastros uko kuiswa kwemapakeji epamutemo kwaive kwakaomarara zvisina basa.
Handifunge kuti kushandiswa kweDiscord paArch kunonyanya kukonzerwa nemitambo, asi kutaurirana kuri nyore, zvichipiwa chokwadi chekuti ndiyo inotevera inoshandiswa kuSkype uye hurukuro zhinji pakati pevashandi inongova izwi chete. Mupfungwa iyoyo, Discord ndiyo inonyanya kuzivikanwa kutsiva Skype.
Ndinoziva kuti jee neBach uye bachata rinogarapo, jee, asi semunhu anofarira baroque mumhanzi iwe unonyatso kuziva kuti kune kwakawanda kududzirwa kweBach paSpotify kupfuura iwe waunogona kunzwa muhupenyu hwako hwese.
Kwaziso, uye nekutenda nerinonakidza runyorwa.
Ehe, iko kuseka, asi kwete nekuda kwekushayikwa kwemukati, kana zvisiri nekuda kwekuti ini ndinofunga ndaigona kuteerera bachata.
Yakaburitsa vhezheni itsva yeFuntoo 1.4, iyo distro yemuvambi weGentoo